China 380w Monocrystalline Half Cell Solar PV ထုတ်လုပ်သူများ နှင့် ထုတ်လုပ်သူများ - Rixing Electronics
ကျွန်ုပ်တို့သည် 380W Monocrystalline Half cell solar PV 2021 အရည်အသွေးမြင့် TUV CE UL ကို 25 နှစ်အာမခံ၊ 166 half cell high watt သည် သင့်တောင်းဆိုမှုကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဥရောပနှင့် တောင်အမေရိကစျေးကွက်အများစုကို လွှမ်းခြုံထားသည့် ဆိုလာပြားအတွက် 15 နှစ်ကြာ လုံးလုံးလျားလျား မြှုပ်နှံထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တရုတ်တွင် သင်၏ ရေရှည်လက်တွဲဖော်ဖြစ်လာရန် မျှော်လင့်ပါသည်။
တရုတ် 380W Monocrystalline Half cell ဆိုလာ PV ထုတ်လုပ်သူ
စိတ်ကြိုက်လက်ကားဝယ်ယူရန်ကြိုဆိုပါသည်။320W Polycrystalline နေရောင်ခြည်PVကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှ နောက်ဆုံးပေါ်ရောင်းချမှု၊ နောက်ဆုံးပေါ်၊ အဆင့်မြင့်၊ လျှော့စျေးနှင့် အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူရန် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့လာရောက်ရန် ကြိုဆိုပါသည်။320W Polycrystalline နေရောင်ခြည်PV.ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ လျှော့စျေး ထုတ်ကုန်ကို ဝယ်ယူရန် စိတ်ချယုံကြည်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန် မျှော်လင့်ပါသည်၊ ပိုမိုသိရှိလိုပါက၊ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ယခုပင် တိုင်ပင်နိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား အချိန်မီ အကြောင်းပြန်ပေးပါမည်။
1. သင့်တွင် 380W Monocrystalline Half cell solar PV နှင့် ပတ်သက်သော ကျွန်ုပ်တို့၏စကားလုံးရှိသည်။
100% အပြည့်အဝ အလိုအလျောက် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတွင် 100% စည်းစစ်ဆေးခြင်းကို အာမခံပါသည်။ ဝှက်ထားသော အက်ကြောင်းများနှင့် မွေးရာပါချို့ယွင်းချက်များ အန္တရာယ်ကို ထိရောက်စွာ ရှောင်ရှားခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်း၊ လက်စွဲအမှားများကို လျှော့ချခြင်း၊ တိကျသော ဂဟေဆက်ခြင်း၊ နှင့် တစ်ပြေးညီ ထုတ်ကုန်အရည်အသွေး စံနှုန်းများကို ထိန်းသိမ်းခြင်း။
2. Multi-busbar နှင့် half cut technologies တို့ဖြင့် 166mm ဆီလီကွန် wafers များကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် module series ကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ပေါင်းစပ်ဖန်တီးမှုနည်းပညာကို ထိထိရောက်ရောက် ၊ module efficiency နှင့် power output ကို အလွန်တိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်။
QJM360-120H(9BB) QJM365-120H(9BB) QJM370-120H(9BB) QJM375-120H(9BB) QJM380-120H(9BB) QJM385 -120H(9BB)
ဆိုလာဆဲလ် (အရေအတွက်/ပစ္စည်း/အတိုင်းအတာ)၊ 120(6*10+6*10)၊ monocrystalline၊ 166*83mm
မော်ဂျူးအတိုင်းအတာများ (L/W/H) 1765*1048*35/40,1776*1052*35/40,1756*1040*35/40,1763*1040*35/40mm
Module အလေးချိန် 20 ကီလိုဂရမ်
အထူးကောင်းမွန်သော PID ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
380W Monocrystalline Half Cell ဆိုလာ PV ကို အိမ်၊ ခြံ၊ စီးပွားရေး အဆောက်အဦ၊ ဆေးရုံ၊ ကျောင်း၊ စက်ရုံ...
380W Monocrystalline Half cell ဆိုလာ PV တွင် ဤစမ်းသပ်မှုများ ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ 380W Monocrystalline Half cell solar PV ၏ လက်မှတ်။
hot Tags:: 380w Monocrystalline တစ်ဝက်ဆဲလ်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး PV၊ လက်ကား၊ ဝယ်၊ စိတ်ကြိုက်၊ အစုလိုက်၊ ဟော့ရောင်း၊ တရုတ်၊ စျေးပေါ၊ စျေးနှုန်းသက်သာ၊ အသစ်ဆုံး၊ အရည်အသွေး၊ အဆင့်မြင့်၊ တာရှည်ခံ၊ ထိရောက်မှု၊ သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်၊ Off Grid၊ On Grid၊ TUV၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ စက်ရုံ၊ စတော့ရှယ်ယာ၊ အမှတ်တံဆိပ်များ၊ တရုတ်တွင်ထုတ်လုပ်သည်၊ စျေးနှုန်းစာရင်း၊ CE၊ 25 နှစ်အာမခံ